Tsy manam-paharoa ny mampifandanja ny samy hafa Self Scooters - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Ny mannequin tsy maintsy tapa-kevitra toy ny isan-ny hatsaran'ny ny maotera. Eny, dia handeha vidiny anao vola be, na izany aza maka jereo kely ny fanorenana, ary ny fanorenana, noho ireo porofo kalitaon'ny mampidi-doza ity zazalahy, manontany tena ianao raha sisa na tsia dia mpanova in niafina. Rechargeable mora, tsotra ny hifehy ireo na dia ho antsika izay tsy lavitra ny skateboard na Electric longboard, Lasantsy fahavaratra vola, mampiasa remotes tsotra, inona no ho tsy tia ny zavatra ity? Izany dia hahatonga ny kodiarana mba mihodina malalaka sy mety amin'ny ratsy ny tena na ny ratra ny olana manodidina anareo. Kodiarana roa manana vatana maharitra eo hoe: Aiza misy afaka mahita ny eo amin'ny faritra. Azo inoana fa ho henjana fikarohana mikitoatoana an-dalana. Manana mpiasa famolavolana izay mamela lohalika kokoa efitra sy mamily fitantanana, haingana hiditra bateria entana, Adjustable seza haavon'ny sy puncture-porofo kodiarana. Soa ihany fa ny tahotra fa ny orinasa lehibe miankina amin'ny orinasa mpamokatra entana faobe hahita izay mba hitako sy hanorotoro ny fiakaran'ny efa voaporofo tsy mitombina ny teknolojia. Izahay hizaha toetra ny rehetra tany am-boalohany sehatra fahadisoana sy izahao na misy na dia manome lanja ny fotoana fanampiny fikarohana izany.
Ny hevitra momba ny fiainana tena-traikefa momba ny tena zana-kazo - Koowheel Smart fahaiza-mandanjalanja Wheel K8 dia tena mahasoa sy manan-tsaina satria tena kely sy namorona tany Milan, fa am-boalohany tsena namboarina Vondrona Eoropeana. Amin'ny lafiny iray, Hidden tahony famolavolana, mora entina; Amin'ny lafiny iray, eny dalana kodia famolavolana, mora azony maso eo amin'ny modely eo ho eo. Ankoatra izany, dia Slim sy fahazavana lanjany.
Misy be dia be ny endrika velocity mpitandrina, miaraka amin'ny fahaiza-manao lavitra samy hafa. Ny braking sy ny haingana kely koa ny kamo; Mampalahelo fa tsy afaka mpitaingina notapahiny na hanafaingana ny rehefa mitodika any amin'ny hafa Mazava ho azy fa ny kodiarana sy ny maotera intsony curtailing vahana ny tokony hampihenana ny fahaizany sy ny velocity izy. Fa Koowheel herinaratra hoverboard K8 dia manokana, satria ny hafainganam-pandehan'ny Max dia 10km / h, rehefa ny hafainganam-pandeha ny maotera tonga ny fametrahana fampitandremana hafainganam-pandehan'ny 10km / h, ny fampitandremana buzzer fanairana; raha ambany ny hafainganam-pandeha (teo sarobidy: 10km / h), ny fampitandremana buzzer tsy manao fanairana. Noho izany dia tena azo antoka raha oharina amin'ny olon-tsotra hafa môtô. Tsy mila miahiahy momba haingana loatra ny braking ara-potoana.
Tena iray amin'ny endrika rehetra sy ny mitaingina Na izany aza tsara! Hanombohana ny dianareo izany izay rehetra tsy maintsy ho atao dia ny dingana iray eo amin'ny tongotra ary miandrandra ilay fanazavana momba ny nitarika voalohany ny milina mba hamirapiratra. Noho izany antony izany orinasa isan-karazany eny an-tsena dia tapa-kevitra ny hanorina tena mahay mampifandanja scooter . Alohan'ny mahafantatra ny fomba ny herinaratra skateboardasa, dia tsy maintsy hahatakatra izay ampiasaina hanaovana azy. Ambonin'ny izany, izay tsy ho modelim indrindra amin'ny fonenanao goavam-be goavana fampiasana 3-D teknolojia. Print haino aman-jery no amboarina, azo antoka fa mety tao an-trano ary koa an-toerana. Ny mandeha haingana izany, ny tsara kokoa mba fahamarinan-toerana; ny miadana kokoa mankany isika, raha ny fandehany ho betsaka kokoa sarotra foana mandanjalanja. Na izany aza, ny ambony ny malefaka mihazakazaka ianao, ny costlier dia mahazo. Izany dia midika fa ny vokatra no lasa nifehy tamin'ny alalan'ny fiarovana governemanta-fanaovana fitiliana, ny fanombanana ny herinaratra sy ny bateria, dovia fandaharan'asa ary efa voaporofo ho soa aman-tsara.
Post fotoana: Jan-12-2018